Umanyolo for imbiza izingadi - China Qingdao Inkosi enhle okusha Izinto
Umanyolo for imbiza izingadi
Uma kuziwa ukulima isivande enempilo, kungcono ukusebenzisa zemvelo, manyolo organic. Ngazi ingadi organic kungaba uzwakale scary, futhi abantu bavame sifinyelele for izinto chemical ngoba kubonakala kulula. Kodwa ukusebenza nemvelo, futhi usebenzisa manyolo organic engadini akuyona kuphela enempilo kithi, empeleni isebenza kangcono.
Akukona nzima ukwakha, onothile organic emasimini akho. Enye indlela elula ukukwenza kuchibela senhlabathi yakho nge umquba nezinye izinto zokwakha eziphilayo njalo. Ungakhathazeki, ukuchibiyela inhlabathi akudingeki kube nzima. Ukuchibiyela senhlabathi yakho ungasebenzisa zemvelo, umanyolo eziphilayo ngoba imbiza izingadi - like umquba wenze ngokwakho noma ukuthenga esitolo, noma ungase ukuthenga imikhiqizo efana nesibungu Castings, umquba composted, noma ukuthengisa organic engadini fertilizer. Ungathenga ngisho organic imbiza engadini Umanyolo like Healthy Khulisa organic imbiza umanyolo noma Sustane zonke ukudla isitshalo zemvelo, khuluma ngezinto lula!
Related Post: zonke wensimu entsha yemifino idinga ukwazi 6 izinto
Kukhona amathani ongakhetha emangalisayo ngoba organic engadini umquba emakethe kulezi zinsuku, futhi kukhona super kulula ukuyisebenzisa. Ungase wenezele organic kancane ukukhululwa Umanyolo ensimini ngaphambi kokutshala noma afafaze ngalo emhlabeni phansi amakhambi yakho ngizinwaya ke enhlabathini. Noma kunjalo, amakhambi yakho ziyozuza umsoco wanezela.
isikhathi Iposi: Mar-05-2018